Update : January 13, 2022 H.E. U Aye Myint He never forgot his alma mater. During his tenure as Minister of Science and Technology, he initiated and/or implemented programs to restore RIT to its former glory and to allow “True Home Coming” at the Gyogone Campus in December […]
Update : December 14, 2021 Three Intakes In November 1964, there were three intakes under the New Education System : 1st BE (Class of 70) : corresponds to I.Sc.(A) in the Old SystemThe controversial ILA (Intelligence Level Aggregate) was used for admission400+ students (probably 450) joined.Zaw Min (Nawaday) […]
Update : November 25, 2021 Brief Background U Myo Myint RIT Class of M73 Retired Deputy Chief Engineer, Burma Railways Expertise Oil Painting Water Color Pon Tu Sketch Magazine Cover Design (Occasionally) Cartoons Illustration for Poetic Art (with U Aung Myaing and team) Activities Drew Pon Tus of […]
Kyaw Lin (C73)
Update : October 18, 2021 ကွယ်လွန်သူဦးကျော်လင်းအားရည်စူးလျက် R.I.T(67-73) Civil ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းများမှစုပေါင်းဆွမ်းကျွေးခြင်း အလှူကိုမြန်မာနိုင်ငံ၌ပြုလုပ် ကြရန် ကျွန်တော် တို့၏သူငယ်ချင်များအားလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။ ကွယ်လွန်သူ၏မိသားစုဝင်အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံ၌မရှိကြသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းများမှကုသိုလ်ပါဂင်လှူဒါန်းကြဘို့အကြံပြုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလှူငွေပေးပို့ခြင်းဆွမ်းကျွေးအလှူပြုလုပ်မည့်ကျောင်းဆွမ်းကျွေးမည့်နေ့စသည်တို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ (အလှူငွေပေးပို့နိုင်မည့် Kpay. CBpay. Wave pay နံပါတ်များကိုဖော်ပြပေးပါမည်။) လေးစားစွာဖြင့် ဒေါ်တင်အေး MB.095150669 ဦးလှသောင်း MB.09400972934
Website Water Security and the Changing Climate ကျွန်တော် သိပ္ပံဆောင်းပါးများကို စ ရေးခဲ့သည်မှာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်ခန့်က ဖြစ်သော်လည်း ရေးသမျှကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်မှစ၍သာ ကွန်ပျူတာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းဆောင်းပါး ၇၀၀ ကျော်ကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ အရေအတွက် များသည့်အပြင် ကာလလည်းကြာပြီဖြစ်၍ အချို့ဆောင်းပါးများကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်နေသည်။ ကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်ကြည့်၍ တွေ့မှ ပြန်သတိရသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲ၌ ရေးခဲ့တာတွေနှင့်ဆိုလျှင် ဆောင်းပါး ၉၀၀ ခန့်ရှိပေပြီ။ (၁၉၆၇ က ရေးတာတွေပါ ထည့်ရေလျှင် ၁၀၀၀ ကျော်လိမ့်မည်။) ဆောင်းပါး ၉၀၀ ခန့်တွင် အထွေထွေဗဟုသုတ၊ မျက်မှောက်ရေးရာ […]